Nhau - Takabata chibooreso chemoto mangwanani aGumiguru 9, 2020
Takabata chibooreso chemoto mangwanani aGumiguru 9, 2020
Kuti tisimbise ruzivo rwevashandi vese nezvekuchengetedza moto, uye nekuvandudza hunyanzvi hwavo mukudzivirira moto uye kuyamura njodzi, zvakare kudzivirira tsaona mubhudhi, isu takabudirira kubata chibhorani chemoto mangwanani a Gumiguru 9, 2020, inova imwe mwedzi pamberi pezuva renyika rekuchengetedza moto. Vanopfuura vanhu zana kubva kumadhipatimendi ekugadzira, zvikwata zvinehukama zvinoshanda uye zvekuchengetedza vakapinda pachibhorani chemoto.
Pamberi pekutanga kwekuboora, maneja wedu mukuru Alex aifambisa, akatsanangura mutemo wemakwikwi uye mapoinzi ekuti atariswe. Mukupedzisira kwezhizha uye kutanga kwematsutso, tembiricha ichiri yakanyanya kukwirira, kuchengetedzeka kwekambani moto kwave kukoshesa basa rekugadzira chengetedzo. Kuburikidza neichi chibooreso, vese vashandi vakavandudza yavo yekuchengetedza moto kuziva uye hunyanzvi hwekuzvibatsira, izvo zvingaite basa rakanaka mukugadzirwa kwekuchengetedza uye kuchengetedza mhuri mune ramangwana. Mutungamiri weboka rekuchengetedza akatsanangura zvakadzama mashandisirwo emidziyo yekurwisa moto uye akaratidza zvakakosha. Iyi poindi yakakosha yekurwisa moto yakayeukwa nesu tese.
Mushure mekuboora, maneja wekugadzira Mr. Li akashevedza vese vashandi kuti vadzidze uye vagone ruzivo rwekuchengetedza moto uye kusimudzira kuziva kwekuchengetedza. Kana paine moto, tinofanirwa kugadzikana nawo uye toita basa rakanaka mukudzivirira kwekuchengetedza. Isu tinogona kutenda kuti ichi chibooreso chinopa chinoshanda chiitiko chinoshanda uye zvakarongeka zvechimbichimbi basa mune ramangwana, uye zvakare nekuisa hwaro hwakasimba hwezuva nezuva kugadzirwa kwekuchengetedza!